Tim Cook anofara nemhinduro iyo iPhone 8 iri kuwana | IPhone nhau
El Chishanu 22 raive zuva rekuburitswa kweiyo nyowani iPhone 8, chishandiso chitsva chevakomana kubva kublock chatiri kutaura nezvacho mumazuva apfuura. Uye kunyangwe isu tichakamirira kusvika kweiyo iPhone X, iyo iPhone 8 ine zvakawanda zvekutaura nezvazvo, ndeimwe yeakanakisa mafoni emusika pamusika uye kwete zvese zviri kuramba zvichigadzirwa zveiyo iPhone 7 ...
Takazviona nemusi weChishanu iwoyo kuApple Store muPuerta del Sol, uye tiri kuzviona paApple Store online, kuwanikwa kweiyi iPhone 8 kunotanga kudonha. kupera kwevhiki mune iyo yakachengetwa masosi, asi izvo zvava kunetsa kuwana. Kudzokorora tinowana izvozvo iPhone 8 haiwanikwe (mune chero chimwe chayo chakasiyana) mune chero Apple Chitoro, uye kana isu tichihodha nayo kuendesa kumba nguva yekuendesa iri "pakati pe1 uye 2 mavhiki". Chinhu chine kufara (pachena) ku Tim Cook, uye saka akataura mumashoko ake achangoburwa. Mushure mekusvetuka tinokupa iwe hwese ruzivo rwezvazvino zvirevo kubva kuna CEO weApple.
Munguva yekuvhurwa kwe iPhone 8, Sezvazviri, Tim Cook akaenda kuApple Store muPalo Alto, ipapo akaita pfupi zvirevo kune vakomana ve CNBC achitaura pamaonero ake pamusoro pekutengesa kweiyo iPhone 8 uye Apple Watch neLTE. Ivo vaviri vakatengesa kunze nezuva rimwe chete yekuburitswa kwayo kunyangwe chiri chokwadi kuti iyo iPhone 8 ine stock yekuvhara iyo yakanyanya kudiwa.
Zvatiri kuona izvozvi ndezvekuti iyo Apple Tarisa LTE yatengeswa kunze munzvimbo zhinji dzenyika. Tiri kushanda pasimba sangana nekudiwa kukuru. Isu tanetawo iyo iPhone 8 uye iPhone 8 Uyezve, kunyange tine stock yakakwana. Handikwanise kufara.
Tim Cook akashinga kutaura pamusoro pe zvinetso izvo zviri kutaurwa nezve Apple Tarisa neLTE uye matambudziko anowanikwa nevamwe vashandisi ekumisikidza data kubatana pavanosiya network yeWi-Fi, chimwe chinhu chaakati chichagadziriswa nekuvhurwa kwesoftware nyowani.
Ndicho dambudziko risina kukosha zvakanyanya uye ichagadziriswa ne software update. Dambudziko riripo mukuchinja kweWi-Fi uye nharembozha, uye tichazvigadzirisa. Izvo zvinongoitika mune akati wandei zviitiko. Ndakamboishandisa kwechinguva uye inoshanda mushe, ndinofara kutaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 8 » Tim Cook anofara nemhinduro irikuwana iyo iPhone 8
Rega ndimbonetseke, usatende, kana iri maneja ekuchengetedza varimi kuti vafare
Asi ikozvino mhando dzese dzinowanikwa mune ese mavara mu3-5 mazuva ebhizinesi. Ese ari maviri akajairwa uye 8 kuwedzera. Kune angori akati wandei ayo iyo 8gb vhezheni inotora 256-1 mavhiki ...
Mamwe makore angave akaneta kubva pakutanga.
Iri kuve yekutengesa flop, isu tese takamirira iyo X
Ndeipi iyo App Store Wishlist yakapinda muIOS 11?